घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू नर्वेजियन फुटबल खेलाडीहरू मार्टिन Odegaard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो मार्टिन ओडेगार्ड जीवनीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन (ओडा बुरुड), कारहरू, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
यो राम्रो पढाइको विवरण हो मार्टिन Odegaard को वृद्धि, पतन र फिर्ती। तपाईंलाई जीवनीको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन र क्यारियरको प्रगतिको चित्रण सार हो।
मार्टिन Odegaard जीवन कहानी।
हो, सबै मार्टिन Odegaard उत्कृष्ट पास क्षमताहरु, असाधारण प्रविधि र dribbling कौशल को बारे मा सजग छ। यद्यपि केवल केही व्यक्तिले उनको जीवनी पढेका छन् जुन अत्यन्त आकर्षक रहेको छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मार्टिन Odegaard बचपन कहानी:
बायो स्टार्टर्सको लागि, उनको उपनाम एल-रे हो। मार्टिन एडेगाार्डको जन्म १ December औं डिसेम्बर १ 17 .1998 मा नर्वेको Drammen शहर मा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा लेनी सेसिल र उनका बुबा हंस एरिकमा जन्मनुभएको थियो।
मार्टिन ओडेगाार्डका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
मार्टिन Odegaard परिवार मूल:
लेन सेसिल र हंस एरिकको छोरा ड्रममेनको बोनाफाइड मूलका साथै नर्वेको नागरिक हो। वास्तवमा, उसको पारिवारिक जरा उत्तरी यूरोपीय देशमा गहिरो रूपमा स्थापित छ जहाँदेखि उनी सबैभन्दा तातो युवा प्रतिभा हुन् ओले गुन्नार सोल्स्कजायर।
ऊ जन्म भएको सहरको मूल निवासी हो।
मार्टिन Odegaard बढ्दो वर्ष:
के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि एल्-रे ट्रामपेग, ड्रममेनको सानो, शान्त भागमा हुर्कियो? चाखलाग्दो कुरा, ओडेगार्डको उदय हुनु भन्दा पहिले, मानिसहरूले कहिल्यै शहरलाई फुटबलको साथ जोडेनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, यो केवल फजर्ड्स, पहाडहरू, रमणीय उपत्यकाका लागि रंगीन काठको घरहरू, बाक्लो हिउँ र उत्तरी बत्तीहरूको लागि छरिएको थियो।
उसको ठूलो भाई र बहिनी संग मार्टिन Odegaard को बचपन को तस्वीर।
यसैले, Drammen को मूल निवासी Odegaard आफ्नो शहर को फुटबल हटस्पट को नक्शा मा राख्न को लागी धन्यवाद छ। यो शहरमा नै ओडेगार्डले खेल खेल्न थाले जब उनका ठूला भाई क्रिस्टोफर र दुई साना बहिनीहरू, एमिली र मारी सँगै हुर्किए।
मार्टिन Odegaard परिवार पृष्ठभूमि:
ठूला-ठूला, एल्-रेसँग खेलकुदको रमाइलो मौसम थियो र बच्चाको रूपमा केही पनि अभाव भएको थियो। यद्यपि मध्यम-वर्गका नागरिकहरू, ओडेगार्डका अभिभावक र हजुरबा हजुरआमा लुगा व्यवसायमा थिए।
थप रूपमा, उनका बुवा फुटबल व्यवस्थापनमा थिए एक पेशेवरको बर्ष पछि। तसर्थ, यो यो भन्ने बिना नै जान्छ कि खेलमा पागल पैसाले ओडेगार्डको परिवारलाई आरामसँग बस्न मद्दत गर्‍यो।
कसरी क्यारियर फुटबल मार्टिन Odegaard को लागी शुरू भयो:
एल्-रे6बर्षको उमेरमा, उहाँ पहिले नै स्थानीय क्लब Drammen Strong को एक सदस्य थिए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनका आमाबुबा र अरूले क्लबलाई कृत्रिम मैदानमा भर्खरै ठूलो मात्रामा पैसा दिएर उनीहरूको बजरी मैदानमा पुन: भरिदिए।
उनी छ वर्षको उमेरदेखि नै फुटबलमा थिए।
Odegaard को विकासको लागि लगानी महत्वपूर्ण थियो किनकि यसले उसलाई मैदानमा असंख्य घण्टा अभ्यास गर्न मद्दत गर्‍यो। फलस्वरूप, युवा ओडेगार्डले पहिले नै सीपहरू तिखार्ने काम गरिसकेका थिए जब उनी स्ट्रिम्सगोडसेटको युवा डिभिजन, आफ्नो बुबाको पुरानो टीममा सामेल भए। वास्तवमा, उनले कोच र स्टाफलाई आफ्नो प्राकृतिक कौशलता र कार्य नैतिकताको साथ सहजै प्रभावित गरे।
Strømsgodset संग आफ्नो क्यारियर को चरम मा स्टारलेट,
क्यारियर फुटबल मा मार्टिन Odegaard प्रारम्भिक वर्ष:
जब तत्कालीन द्रुतगतीमा फुटबलरले अन्ततः स्ट्रिमसगोडसेटको लागि वरिष्ठ पदार्पण गरे, उनका प्रशंसकहरूलाई उसले गरेका त्यागहरू थोरै नै थाहा थियो। सुरुमा उनी अझै अनिवार्य शिक्षाबाट गुज्रिरहेका थिए। त्यसकारण, उसले आफ्नो क्लबसँग दिनको समयमा ट्रेन गर्ने मौका कहिल्यै पाएन।
यसको सट्टा, उसले स्कूल पछि राती प्रशिक्षण दिए। जहाँसम्म, उहाँ आफ्नो १th औं जन्मदिन अघि नर्वेको शीर्ष उडानमा नियमित उपस्थितिहरू अप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। साथै, उसले गोल स्कोररका रूपमा आफ्नो नाम कमायो र क्लब र देश दुबैका लागि शीर्ष सहायक निर्माता।
उहाँ (दुबै फोटोहरूमा बायाँ) दुबै क्लब र देशहरूका लागि सम्पत्ति थिए।
आफ्नो छोराको प्रारम्भिक सफलताबाट प्रभावित, हंस एरिकले महसुस गरे कि उनको छोराले ठूलो लिगमा खेलेको यो लामो समय बितेको हो। यसैले उनले ओडेगार्डलाई युरोपका शीर्ष क्लबहरू लिभरपुल, बायर्न म्यूनिख र आर्सेनलसँग प्रशिक्षित गर्न लगे जुन उनीहरूको सब भन्दा ठूलो - रियल मैड्रिडमा स्थायी बन्दै थियो।
मार्टिन Odegaard जीवनी - प्रख्यात कहानी को लागी:
उक्ति जस्तै, तिनीहरू छन् यदि तिनीहरू पर्याप्त राम्रो हो, तिनीहरू पर्याप्त पुरानो। किशोर आश्चर्यद्वार मार्टिन Odegaard स्पेनिश राक्षसहरू प्रभावित गर्न धेरै कलिलो थिएनन्। वास्तवमा, उसले पहिलो टीमको रियल म्याड्रिड सुपरस्टार्ससँग प्रशिक्षण सुरु गर्यो जबसम्म उनी लस ब्लांकोको भण्डारमा थिए। जब स्टार्टले अन्ततः २०१ Los मा 'gadegaard' को साथ लस ब्ल्यान्कोसको लागि शुरुवात गर्‍यो भने २०१ R मा 'रोनाल्डो' भएकाहरूका लागि आउटडल गर्‍यो।
उनले पनि एक विकल्प को रूप मा आफ्नो पहिलो शुरुआत गरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो.
यद्यपि, उसको वरिपरिको जोखिम पहिलेको टीमको अभावका कारण डुब्न थाल्छ राफेल बेनिटेज को बर्खास्त पछि वरिष्ठ सेट अप को जिम्मेदारी लिनुभयो कार्लो एसेस्टीटी। न त पहिलो टीमको अवसर किशोर किशोरीको लागि आए Zinedine Zidane पहिलो-टीम प्रबन्धकमा पदोन्नती गरियो। नतिजाको रूपमा, उनी डच संगठन एससी हीरेनवीनलाई edण लिइएको थियो, जहाँ उनी नम्र भई स्पटलाइटबाट नियमित प्लेटाइम टाढा थिए।
मार्टिन Odegaard जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
Whatण फार्मको रूपमा राम्रो वर्णन गर्न सकिनेमा ईम्मेड गरिएको, ओडेगार्ड डच पक्ष Vitesse मा हस्तान्तरण गरिएको थियो। उनी प्रभावशाली ढंगले एडिभिसीको सीजनका खेलाडीहरू मध्ये नौ जना गोल गरेर र १२ सहायक रेजिस्टर गरेर बन्न पुगे।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, लस ब्ल्यान्कोसले उनीहरूले मोलतोल गरे भन्दा बढी पाए जब २०१ in मा स्टारलेट रियल सोसिआडाडमा edण लिएको थियो। गोलले छक्क परेका, लस ब्ल्यान्कोसका फ्यानहरूले युवालाई स्थायी ओभिएशन दिन सहयोग गर्न सकेनन्।
मार्टिन Odegaard को जीवनी मा यो टुक्रा लेख्दा, मिडफील्ड मास्ट्रो साथ यहोशू राजा र अलेक्ज्याण्डर सर्लोथ नर्वेजियन फुटबलमा मान्यता प्राप्त ताराहरू हुन्।
अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मार्टिनले आर्सेनलसँग onण सौदामा सामेल भएको छ। माइकल अर्टेटा उसको ट्र्याक रेकर्ड थाहा छ र विश्वास छ कि उसले क्लबको मिडफील्डको अभाव भएको अत्यधिक-आवश्यक सिर्जनात्मकता इन्जेक्सन गर्नेछ। उत्तर लंडनको ओडेगार्डलाई जुनसुकै तरिकाले पेन गर्नुहोस्, बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हुनेछ।
एक loanण सम्झौता मा गनर्स को सामिल छ जो हेर्नुहोस्।
मार्टिन Odegaard प्रेमिका को हो:
फुटबलमा धेरै रमाईलो युवा प्रतिभाहरू विरलै एक रोमान्टिक भूत छ। यो होइन मार्टिन Odegaard को मामला जसको एक प्रेमिका थियो। उनको नाम ओडा बुरुड हो। उनी नर्वेली र फुटबल खेलाडी हुन्। तिनीहरू प्लेयरको म्याड्रिड सर्नु अघि एक रोमान्टिक जोडी हुन।
हामी भन्न सक्दैनौं कि ऊ मुटुको मामिलामा परदेशी छ।
मिडफिल्डरले माद्रिदमा सामेल भएपछि उसको प्राथमिकता पायो जस्तो देखिन्छ कि उनी र बुरुडको बारेमा त्यति धेरै सुनेको छैन। जसरी हामीले बुझेका थियौं कि उनी अविवाहित छन। ऊ गोप्य रूपमा डेटि। पनि गर्न सक्थ्यो। जुनसुकै अवस्थामा पनि, फुटबलले रहस्यलाई घृणा गर्छ र नेटिज्जनहरूलाई यसको बारेमा थाहा पाउनु अघि लामो हुँदैन।
मार्टिन Odegaard परिवार जीवन:
फुटबल प्रतिभा जन्म छैन तर बनेको छ। यो एक परिवार ले एल-रे जस्तै प्रतिभा बनाउन को लागी लिन्छ। हामी तपाइँलाई मार्टिन Odegaard आमा बुबा को बारे मा तथ्यहरु ल्याउन। हामी यहाँ तिनका भाईबहिनीहरू र आफन्तहरूको विवरण पनि उपलब्ध गराउँदछौं।
मार्टिन Odegaard पिता को बारे मा:
हंस एरिक सुपरस्टारका बुवा हुन्। पहिले नै भनिएझैं ऊ एक पेशेवर फुटबल भएको छ। वास्तवमा, एरिकले २०० his मा आफ्नो बुट झुन्ड्याउनु भन्दा पहिले नर्वेली क्लब, स्ट्रिमसगोडसेट र स्यान्डफजर्डका लागि केन्द्रीय मिडफिल्डरको रूपमा खेल्नुभयो।
मार्टिन Odegaard बुबा, एरिक।
सहायक बुबा अब फुटबल व्यवस्थापन मा छ। ऊ उसको ओडेगार्ड एजेन्ट र अन-आधिकारिक प्रबन्धकको रूपमा सेवा गर्दछ। थप रूपमा, एरिकले सुनिश्चित गर्दछ कि ओडेगार्ड लगातार अभ्यास प्रणालीको माध्यमबाट जान्छन् किनकि उनी अगाडि एक दशकको क्यारियरको आशा गर्दछन्।
मार्टिन Odegaard आमा को बारेमा:
लेन सेसिल स्टार्टकी आमा हुन्। उनीसँग शान्त व्यवहार छ जुन हामी विश्वास गर्छौं कि ओडेगार्डले विरासतमा पसे। पछि अचम्मलाग्दो कुरो त कि उनले सर्जियो रामोसलाई वेवास्ता गरे तर पछि क्रोधित उनकी आमाले म्याड्रिड र सोसिआदादको बिचको झगडाको क्रममा खराब नाम बोलाए।
मार्टिन Odegaard आफ्नो आमा संग।
रामोसको अपमानजनक आक्रोश पछि ओडेगार्डले उनलाई ढिलोमा पक्राउ गरे पछि आफैलाई पहेंलो कार्ड कमायो। यदि केवल कप्तानले थाहा पाउँथे कि ओडेगार्डकी आमा कति सुन्दर र सहयोगी छन् भने उसले आफ्नो WW **** आमामा 'I s ***' भन्ने छैन।
मार्टिन Odegaard भाई बहिनीहरू को बारे मा:
मिडफिल्डरको एक दाइ र दुई बहिनीहरू छन्। आफ्नो भाइसँग सुरु गर्न, उनको नाम क्रिस्टोफर हो। उहाँ शारीरिक तन्दुरुस्तीमा चासो राख्ने गार्ड हुनुहुन्छ।
मार्टिन Odegaard आफ्नो जेठो भाई Kristoffer संग।
यस बीच, निजी जीवन बिताउन रोज्ने ओडेगार्डका बहिनीहरू एमिली र मारीको बारेमा केही रेकर्ड छैन। हामी शर्त लगाउँछौं कि उहाँहरू आफ्ना आमा-बुबाजस्ता सहयोगी हुन्। यद्यपि बहिनीहरूले उनको ख्याति बढाउन नचाहे।
मार्टिन Odegaard आमा र बहिनीहरू संग।
मार्टिन Odegaard नातेदारहरूको बारेमा:
एल-रेको नजिकको पारिवारिक जीवनबाट टाढा, हामी उसको हजुरबा हजुरआमाको बारेमा जान्न उत्सुक छौं। हामी शर्त गर्छौं कि उसको काका र काकी छ। को हुन तिनीहरु? साथै, हामी उनको भतिजा, भतिजा र भतिजालाई भेट्न चाहन्छौं।
मार्टिन Odegaard व्यक्तिगत जीवन:
के तपाईंले कसैलाई भेट्नुभयो? हास्यास्पद र सँगै जान सजिलो? यदि हो, त्यसो भए तपाईं सजीलै Odegaard अफ-पिच व्यक्तित्व गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक खेलाडी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं Odegaard मा एक साथी छ।
के तपाईंलाई शतरंज मन पर्छ? उसलाई कल दिनुहोस्! थप रूपमा, उनी पढ्न मन पराउँछन्, स्मूदी बनाउँछन् र साथीहरू र परिवारसँग बाहिर निस्किने समयको लागि समय सिर्जना गर्दछन्। उहाँ पूर्ण प्लेमेकर होइन?
हामीले जिस्काइरहेका थिएनौं जब हामीले उहाँलाई स्मूदी बनाउन मन पराउँछन्।
मार्टिन Odegaard जीवन शैली:
२०१ 2015 मा, एक किशोर स्टारलेट थियो जसको साप्ताहिक आम्दानी न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार $ ,45,000$,००० भन्दा कम थिएन। के तपाईं प्लेमेकर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हो, Odegaard! २०२१ सम्म छिटो अगाडि उसले कमाउँछ र worth.2021 मी युरोको कुल सम्पत्ति छ र हप्तामा १०,००,००० डलर कमाउने छ। ज्याला रियल म्याड्रिडमा उसको £ ,4.7,००० को तलब दोगु छ।
हाम्रो सामूहिक विवेक को खातिर, यो बुद्धिमानी हुनेछ कि हामी साप्ताहिक तलब को रूप मा यति ठूलो रकम भएको बारे कल्पना छैन। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि कल्पना नगर्नुहोस् कति वर्षमा उसको गाडीमा २२ वर्ष पुरानो कार छ। थप रूपमा, यसले हाम्रो सन्तुष्टि धेरै राम्रो गर्छ यदि हामी ओडिगार्ड घर वा अपार्टमेन्ट हामी बस्छौं भन्दा आश्रयहरू भन्दा एक लाख गुणा राम्रो छैन भनी नाटक गर्छौं।
यो फोटोले एक हजार शब्दहरू बोल्दछ। होईन?
मार्टिन Odegaard को बारे मा तथ्यहरु:
यो रोमाञ्चक खेलाडीमा रोयायो बायो लपेट्न, यहाँ तथ्यहरू छन् जुन तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्न।
तथ्य # १ - मार्टिन Odegaard आर्सेनल वेतन र प्रति सेकंड कमाई:
प्रति वर्ष: £ 5,200,000।
प्रति महिना: £ 433,333।
प्रति हप्ता: £ 100,000।
प्रति दिन: £ 14,286।
प्रति घण्टा: £ 595।
प्रति मिनेट: £ 10।
प्रति सेकेन्ड: £ 0.16।
तपाईले मार्टिन Odegaard हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य #2- FIFA रेटिंग:
Lifebogger मा, हामी सुपरस्टारहरूसँग स्टारलेटहरू तुलना गर्न दृढ निरुत्साहित गर्दछौं, तर हामी अहिल्यै सहयोग गर्न सक्दैनौं। Odegaard 83 points को सम्भावनाको साथ points 89 अ of्कको समग्र मूल्या rating्कन छ जुन उनलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठमा नजिक पुर्‍याउँछ।
जस्तै ईरलिंग ब्रुट हालान्ड यो पनि छ (२०२० सम्म 92 २ सम्भावित रेटिंग्स), ओडेगार्डको प्रभावशाली भविष्यको तथ्या .्कहरूले तपाईको बारेमा पढेका र सुन्नु भएका हरेक hype लाई उचित ठहराउँछ। ऊ कोलोसस हो, नर्वेको खजाना। हामी आशा गर्दछौं कि उसले आफ्नो करियरको शिखरमा यस सम्भाव्यता प्राप्त गर्दछ।
तथ्य #3- मार्टिन Odegaard धर्म:
जब यो विश्वासको कुरा आउँछ, ओडेगार्डले एक इसाईको रूपमा पहिचान गर्दछ। वास्तवमा, उहाँ एक इसाई घरमा हुर्कनुभयो र एकपटक समाचारकर्मीलाई भन्नुभयो कि धार्मिक विश्वास उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
मार्टिन Odegaard को बायो को सारांश प्राप्त गर्न, यहाँ तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: मार्टिन gadegaard।
जन्म मिति: डिसेम्बर १ 17 1998 XNUMX को १th औं दिन।
जन्मस्थान: नर्वे मा Drammen को शहर।
अभिभावक: लेन सेसिल (आमा) र हंस एरिक (बुबा)
Siblings: क्रिस्टोफर (जेठो भाई) एमिली र मारी (साना बहिनीहरू)।
फिटमा उचाई: Feet फिट, १० ईन्चहरू।
कुल मूल्य: 4.7 मीटर यूरो
मार्टिन ओडेगाार्डको बचपनको जीवनीमा यस जानकारीमूलक अंश पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्छौं कि मिडफिल्डरको रोमाञ्चक जीवन कथाले नर्वेको स्थानीय बस्तीबाट प्रीमियर लिगसम्मको आफ्नो यात्राको बखत विवरण तपाईंलाई प्रतिभाको जन्म होइन तर बनेको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न प्रेरित गरेको छ।
जसरी मार्टिन ओडेगाार्डका अभिभावकहरूले उनको अभ्यास र समग्र विकासको लागि प्रयास र स्रोतहरू प्रतिबद्ध गरे। यो मिडफिल्डरका आमा-बुबाको शब्द र कार्यहरूमा उसको फुटबल क्यारियरलाई समर्थन गरेकोमा उनीहरूको प्रशंसाको लागि यो मोवाँमा हामी सुन्दर छौं।
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।
मार्टिन Odegaard 1998 मा जन्म
जवाफ दिनुहोस् Clara711
नमस्ते क्लारा। मार्टिन Odegaard को जन्म मिति मा हामीलाई सुधारको लागि धन्यवाद। हामीले त्यो प्रभाव पारेका छौं।